लकडाउनमा पनि रोकिएको छैन आयात निर्यात, चैतमा कति व्यापार भयो ? - Aarthiknews
लकडाउनमा पनि रोकिएको छैन आयात निर्यात, चैतमा कति व्यापार भयो ?
काठमाडौं । कोरोनाको असर वैदेशिक व्यापारमा पनि देखिएको छ । अन्य महिनामा औसतमा एक खर्बको आयात हुने गरेकोमा चैत महिनामा भने आयात घटेर ५८ अर्ब २९ करोडमा सीमित भएको छ । चैत महिनामा आयातमात्रै घटेको छैन निर्यात पनि घटेको छ ।
चैत महिनामा जम्मा ३ अर्ब ९१ करोडको वस्तु तथा सेवा नेपालबाट बाहिरिएका छन् । चैत महिनामा कुल वैदेशिक व्यापार १० खर्ब ३७ अर्ब पुगेको पुगेको छ । फागुन महिनामा यस्तो यस्तो व्यापार नौ खर्ब ९९ अर्ब थियो । कुल वैदेशिक व्यापारमा आयातको हिस्सा ९२.५७ र निर्यातको अंश ७.४३ प्रतिशत रहेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा कुल वैदेशिक व्यापारमा आयातको अंश ९३.८३ र निर्यातको अंश ६.१७ प्रतिशत थियो ।
चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनासम्म कुल ९ खर्ब ८२ अर्ब आयात भएको छ । गत महिनासम्म ९ खर्ब २४ अर्बको वस्तु तथा सेवा आयात भएको थियो । त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा ७८ अर्ब ८१ करोडको वस्तु तथा सेवा निर्यात भएको छ । दोस्रो चौमाससम्म जम्मा ७४ अर्ब ९० करोडको निर्यात भएको थियो । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा आयात ७ दशमलव ४५ प्रतिशतले घटेको छ भने निर्यात १२ दशमलव ८८ प्रतिशतले बढेको छ ।